Singapore: Hahazo Andro Iray Fialan-tsasatra Nefa Handraisan-karama Ihany Ireo Mpiasa An-trano · Global Voices teny Malagasy
Singapore: Hahazo Andro Iray Fialan-tsasatra Nefa Handraisan-karama Ihany Ireo Mpiasa An-trano
Voadika ny 14 Marsa 2012 11:37 GMT
Manomboka amin'ny taona ho avy, tsy maintsy hanome andro iray isan-kerinandro tsy hiasana ho an'ireo mpanampiny avy any ivelany ireo mpampiasa Singaporeana, na mandoa tambin-karama raha mampiasa azy ireo amin'izany andro izany.
Nambaran'ny Minisi-panjakana Misahana ny Asa, Tan Chuan-Jin, tany amin'ny Parlemanta ny 8 Marsta 2012 io fepetra vaovao io, ary nanintona ny fihetseham-po maro avy amin'ny olona amin'ny lafiny roa (mpomba sy mpanohitra).
Tamin'ny 2008, avy amin'ireo fikambanana tsy miankina (NGOs) tahaka ny TWC2, HOME ary Unifem Singapore izay manampy ireo Mpiasa Mpifindra monina, no natomboka ilay fampielezan-kevitra mikasika ny andro iray fialan-tsasatra isan-kerinandro ho an'ireo mpiasa an-trano– izay maro avy amin'izy ireo no avy amina firenena tsy mandroso na faran'izay mahantra tahaka an'i Myanmar, Filipina ary Indonesia.
Avy ao amin'ny pejy Facebookin'ny TWC2
Manoratra ao amin'ny publichouse.sg i Andrew Loh fa zo fototra ho an'ireo mpiasa any aminà firenena maro manerana izao tontolo izao ny andro iray fialan-tsasatra isan-kerinandro:
Ho an'ny olona tsotra, mahatalanjona sy tena mahamenatra ny mahita fa ilaina ny manohana izany fotokevitra izany – lamina napetraka any amin'ireo firenena eran-tany ny andro iray fialan-tsasatra ho an'ny mpiasa. Singapore, kosa anefa indrisy, isan'ireo maningana amin'izany.
Nanoratra lahatsoratra tao amin'ny publichouse.sg ihany koa i Joses Kuan, ary mitehaka an'i Tan Chuan-Jin amin'ireo fihetsiny:
Tamin'ny fotoana nirotsahako an-tsitrapo tao amin'ny TWC2 ao Singapore, tsy nahita mpikambana ao amin'ny governemanta aho , ary indrindra tsy nahita minisitra na iray aza, tena nampirotsaka an-tsehatra ireo ONG manampy ireo mpiasa mpifindra monina sy miezaka hitondra fiovana. Nefa na izany aza, i BG Tan, nankany amin'ilay tetikasa Cuff Road an'ny TWC2, ho an'ireo mpiasa nafindra toerana, naratra ary noararaotina, nanentana ireo Singaporeana tsotra amin'ny fisian'ireo “orinasam-pampodiana” (entina ilazàna ireo jiolahimboto mpandika lalàna) manafintohina, anivon'ireo hetsika mahaleotena hafa. Ity hetsika hanaovan-dalàna mikasika ny andro iray fialan-tsasatra ity kosa anefa dia tsy sarintsarina fepetra fotsiny ihany ary tokony ho tehafana i BG Tan noho ny asany sy ny fitarihany.
Na eo aza izany, nampitandrina ihany koa izy “tsy hientanentana mialoha loatra” :
Mahatonga fanontaniana maro izay tsy mbola voavaly ity hetsika vaovao ity. Ahoana ny fomba hampiharana ity lalàna ity? Iza no hanara-maso ireo mpampiasa ary hanome toky fa hanaraka izany izy ireo? Ahoana ny mikasika ireo famaizana raha misy ny fandikan-dalàna? Raha resaka hatsarana, inona no mahasamihafa an'io lalàna io amin'ilay “fifanekena lasitra” izay efa voapetraka amin'izao fotoana izao (manome tombony an'ireo mpampiasa izany satria dia afaka “mividy andro fialan-tsasatra” an-tsokosoko izy)? Ahoana ny momba fangataham-pahefana na ny fifanekena mpampiasa-mpiasa anaty tontolo vaovao izay matetika manome tombony ny mpampiasa; ary voahitsakitsak'ireo olana amin'ny trosa, findramam-bola tsy maintsy averina sy ny fitànana ny pasipaoro.
Nanomboka nipoitra ireo fitarainana sy fitsikerana avy amin'ireo mpampiasa izay manohitra ity andro iray fialan-tsasatra ity. Misy maromaro amin'izy ireo nanoratra tao amin'ny sehatra fiadian-kevitry ny Straits Times, manonona antony maro samihafa mahatonga azy ireo tsy ho faly, noho ny famoretana amboniny mihatra amin'ireo Singaporeana mpampiasa sy ireo olana ara-tsosialy mitombo.
Nanolo-kevitra ihany koa i Thng Tien Guan fa mety hanimba ny orinasan'ny fizahantany ao Singapore ihany koa io andro iray fialan-tsasatr'ireo mpiasa isan-kerinandro io:
Maro ireo mpiasa an-trano no mivangongo any amin'ny Orchard Road rehefa tsy miasa izy ireo, ary misy vitsivitsy amin'ireny tena be kotaba. Inona no mety ho vokatr'izany amin'ny fizahantany?
Mandiso fanantenana io fanapahan-kevitra tampotampoky ny governemanta hanome andro iray fialan-tsasatra ho an'ireo mpiasa an-trano io, izay mampisy olana iray goavana eo amin'ireo fianakaviana.
Voatsikera mafy tao amin'ny Twitter ny fanoheran'ireo mpampiasa sasany an'ity andro iray fialan-tsasatra ity:
@Giles_iPresume: Ny fandrakofana eran-tany an'ilay faneken'i Singapore ny andro iray fialan-tsasatra ho an'ireo mpiasa an-trano dia mahamenatra, nefa aza miteny izany any anatin'ireo pejy natokana ho an'ny mpamaky ny Straits Times
@woonhian: Mampalahelo izany. Halan'ireo Singaporeana ny iantsoana azy ireo ho alika, nefa tian'izy ireo ny manao izany amin'ny hafa.
@kj_nash: @kixes Tsy ananako fitserana ireo mpampiasa izay ho tapaka fahazarana noho ny tsy maintsy handraisana ny mpiasa an-trano ho tahaka ny olona tsotra.
Nisy ireo nilaza fa manome efitra malalaka ho an'ny fanararaotana io safidy hanolo vola ny andro iray fialan-tsasatra ho an'ny mpiasa io, ary nilaza fa ny $15 – ilay sandam-bola natolotra – dia kely loatra.
@BeccaDBus: @kixes @STcom Ny sandan'ny andro fialan-tsasatra iray dia mira ireo andro rehetra niasanao hahazoana izany. Noho izany, tokony eo ho eo amin'ny $100 eo izany
@leyandrea: AHOANA NO NAHASAHIANAREO MILAZA FA TAMBY ARA-DALANA NY $15 RT @STcom: #Maids tokony hahazo eo amin'ny $15 izy ireo isaky ny miasa amin'ny andro fialan-tsasatra
Nilaza i Eddy Blaxell fa mety hisy hatrany ny tsy fahazoana fisondrotan'ny karaman'ireo mpiasa an-trano:
Nilza ny lahatsoratra iray fa tokony hahazo 15% mihoatra ireo mpiasa an-trano, satria maro amin'ireo mpiasa an-trano no mikarama isam-bolana ary tokony haloa ambonin'ny karamany isam-bolana izany tambin-karama izany.
Nefa tsy mihatra amin'ireo fifanekena efa misy izany fiovana izany. Mihatra amin'ireo mpiasa manana famelana hiasa izay havoaka ny 1 Janoary 2013 izany. Ary tsy mbola voafaritra ny ho karaman'ireo mpiasa ireo amin'izany. Tsy misy ny sakantsakana ho an'ny mpampiasa iray izay te hanakarama mpiasa an-trano mifototra amin'ny fifanekena mitovy amin'izay. Ahenany 15% ny karaman'ilay mpiasa an-trano isam-bolana ary averiny ho toy ny tambin-karama izany. Mora loatra.